Ambohimangakely : mpitondra môtô maty nodomin’ny Sprinter (NewsMada) | AEMW
Ambohimangakely : mpitondra môtô maty nodomin’ny Sprinter (NewsMada)
Maty teny an-dalana nitondrana azy teny amin’ny hopitaly ny tovolahy iray, 26 taona, nitondra môtô nifandona tamin’ny Sprinter, teny Ambohimangakely, ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 4 ora hariva. Avy any Toamasina ho aty Antananarivo ilay taksiborosy io izao nifanehatra tamin’ilay môtô izao. Potika ilay môtô ary ilay tovolahy kosa, voadona mafy ary nipitika lavitra mihitsy. Nifamonjena izy io, saingy maty teny an-dalana hamonjy hopitaly. Notazomin’ny zandary nanaovana famotorana avy hatrany kosa ilay mpamily.
Tranga mitovitovy amin’izay ihany, Sprinter nifanenjika kanjo nandona môtô notangenana roa lahy, tany Ambohitromby Ankazobe, ny asabotsy teo. Potika tanteraka ilay kodiaran-droa ary naratra mafy ireo roa lahy. Naiditra hopitaly izy ireo, ary manaraka fitsaboana.
Teny Analakely ihany koa, vehivavy iray nofaohin’ny fiara ary nidona tamin’ny fitaratra eo anoloana mihitsy. Torana tsy nahatsiaro tena izy io ary nentina tany amin’ny hopitaly. Nidina teny an-toerana ny polisy.
← Be no ho diso fanantenana : ho semban-drahona ny fijerena éclipse eto Antananarivo (NewsMada)
OPJ : nanao fianianana ny inspecteur andiany “Hasina” (NewsMada) →